Buuhoodle oo Roob ku ciidey (Sawiro & Dhegaysi) – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2012 2:01 b 0
Buuhoodle Oct 26-2012-Ciida barakaysan ee Ciidul Adxa oo maanta si weyn ?looga maamuusay dunida Muslimiinta ayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Cayn ay siweyn ugu Maamuuseen magaalada Buuhoodle.
Ciida maanta oo ahayd mid taariikhi ah ayaa dadweynuhu u ciideen si wadajir ah iyadoo uusan jirin wax khilaaf ah oo ciidan ka dhexjirey bulshada Buuhoodle, dadweynaha ciidey ayaa salaada ciida ku tukadey goobaha masaajida ee kala duwan kadib markii Roob qabsaday magaalada subaxnimadii hore ee saaka aysana suurta gelin in dadweynuhu ku tukadaan garoonka kubada cagta oo ciidihii tan ka horeeyey lagu tukan jirey.
Goobaha ay dadka ugu badan maanta ku tukadeen waxaa kamid ah Masjidka Rowda ee magaalada Buuhoodle iyo Masjid Jaamaca ugu weyn gobolka Cayn.
Radio Daljir ayaa Mircorophone ka la dhex maray culimada iyo imisimada gobolka Cayn ee tukanayey saalada ciida Waxaana kamid ahaa isimada ciida ka hadlay ?Suldaan Siciid Cismaan Cali, iyo Garaad Cabdilaahi Garaad Soof.
Munaasibada ciida oo ku beegantay maalin Jimce ah ayaa dadku isugu hambalyeynayeen laba ciidood oo isku aaday iyadoo maantana jawigu aad u qabow yahay lana dareemayo neecaw degan iyo layr ka imanaysa dhinacyada magaalada dadkana waxaa dusha ka haya tiixa Roob saaka ka da’ay Buuhoodle.